Kahor 2020 Citibank wuxuu kaliya doonayaa inuu cuno tamarta dib loo cusboonaysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Citibank wuxuu maalmo ka hor shaaciyay hadafkiisa ah inuu daboolayo 100% isticmaalka tamartiisa tamar dib loo cusbooneysiin karo sannadka 2020, iyada oo qayb ka ah ballanqaadkeeda ah in la yareeyo saamaynta deegaanka ee hawlgalladeeda.
“Waxaa naga go’an inaan adeegsanno tamarta la cusboonaysiin karo si aan ula kulanno baahida tamarta ee dhammaan howlaheenna, iyadoo aan sii wadno bixinta maalgelin mashaariicda laxiriira waxtarka tamarta iyo tamar nadiif ah macaamiisheenna, "ayuu yiri madaxa shirkadda Citibank Michael Corbat.
3 BANKA AMERICA
5 GUULEYSTA GUUD
8 Maxkamada ingiriiska
Si loo dardar-galiyo kala-guurka tamarta loona xoojiyo wax-ku-oolnimada iyada oo ah "muhiim" qayb ka mid ah istiraatiijiyadeeda, Citi wuxuu sharraxay inay tixgelin doonto soo saar koronto 'goobta', fuliyaan heshiisyo iibsi oo loogu talagalay xarumaha dhalinta awoodda degdegga ah, sida xarumaha xogta, marka lagu daro isticmaalka habboon ee dhibcaha tamarta la cusboonaysiin karo.
Sidan oo kale, hay'addu waxay iftiimisay in xarunteeda cusub ee adduunka ee New York, oo weli dhisme ku socota, loo doortay inay hesho qiimeynta LEED Platinum, oo ah heerkii ugu sarreeyay ee ay bixiso Golaha Dhismaha Cagaaran ee Mareykanka.
Intaa waxaa sii dheer, mid ka mid ah xarumaheeda xogta ugu muhiimsan, oo ku yaal Texas, waxay horeyba uga shaqeysaa 50% tamar dib loo cusboonaysiin karo, iyada oo ay ugu wacan tahay qandaraas lala saxiixday Green-e, qaabkan ka fogow is bedbeddelka qiimaha, tan iyo markii ay koronto ku iibsadaan qandaraasyo gaaraya 15 ama 20 sano.
Sida laga soo xigtay Madaxa Sarkaalka Teknolojiyada ee Citi Don Callahan "Iyada oo diirada la saarayo hal-abuurnimada iyo waxtarka, waxaan sii wadaynaa inaan nafteenna kula loollanno hagaajinta tas-hiilaadkeenna iyo howlaheenna adduunka. Si la mid ah, waxay muujisay in Citibank uu raadinayo xulafo cusub inaad la kulanto "himiladan hami leh."
Sida laga soo xigtay xogta hay'adda, tan iyo 2005 waxay ku guuleysatay inay kordhiso waxtarka tamarteeda 25%, yareeyso isticmaalka biyaha 20%, leexiso 61% qashinka, iyo sidoo kale inay ballaariso faylalka ay ka kooban tahay hantida maguurtada ah oo leh shahaadada LEED illaa labaatan%.
Laakiin Citibank maahan shirkadda kaliya ee bilaabaya inay ku soo rogaan bandwagon la cusboonaysiin karo, hoosta waxaan ku magacaabaynaa qaar ka mid ah
Ku hoggaami adduunka cusub hal-abuurkaaga qalabkaaga iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iyo Apple TV. Shirkaddu waxay ka shaqeysaa 23 dal oo leh 100% tamar dib loo cusboonaysiin karo. Sanadkii 2015, 93% koranteeda waxay ka timid ilo dib loo cusbooneysiin karo Applena waa ka go’an tahay gaaraan 100%. Waxay sidoo kale ka caawineysaa la-hawlgalayaasheeda wax-soo-saarka inay yareeyaan raadkooda kaarboonka, iyagoo gacmo-gacmeed ku shaqeynaya si loo rakibo wax ka badan 4 gigawatts oo tamar nadiif ah oo caalami ah sanadka 2020.
Hadafka bangigan Waqooyiga Ameerika ee 2020 waa inuu isticmaalo 100% tamarta uu u isticmaalo dib-u-cusboonaysiinta. Si tan loo sameeyo, waxay horeyba ula shaqeyneysaa rakibidda baararka qoraxda waxayna isticmaashaa Shahaadooyinka Tamarta Cusboonaysiinta (RECs) ee dabaysha xarumaha xogta xafiisyadooda ku yaal Texas.
“Waxaan aaminsanahay in wax ka qabashada isbeddelka cimilada ay u baahan tahay dadaal wadajir ah. Waxaan u baahanahay inaan abaabulno kheyraadkeena oo aan xal u helno iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaha ganacsi ee cagaaran. Iyada oo qayb ka ah dadaalkeenna ku aaddan in aan hoggaamiye maalgashi ku noqonno tamar nadiif ah, Waxaan ballanqaadey in aan $ 125,000 bilyan oo maaliyad ah u siineyno kaarboon yar iyo ganacsi waara marka la gaaro 2025, ”ayuu yiri Alex Liftman, oo ah madaxa deegaanka ee kooxdan, barta RE100.
Shirkadda cabitaannada fudud waxay leedahay himilo hami leh: in la yareeyo raadadka kaarboonka hawlaheeda ugu waaweyn (soo saarista, qaybinta iyo qaboojiyaha) 50% illaa 2020.
Waxaan higsaneynaa inaan yareyno qiiqa ka baxa inta silsiladan qiimaha ku jirta oo dhan. Isticmaalka korantada la cusboonaysiin karo waxay muhiim u tahay kala guurkaan iyo mustaqbalka kaarboon kaarboon yar, ”ayuu qoray Chris Childs, oo hogaaminaya kooxda hogaaminta tamarta iyo isbadalka cimilada ee shirkadda, RE100.
Baabuur-sameeyaha ayaa qorsheynaya inuu daboolo dhammaan baahiyaha koronto ee howlaheeda 350 ee 59 waddan oo leh tamar dib loo cusboonaysiin karo sannadka 2050. Ujeeddadan, oo ay weheliso riixitaanka gawaarida korontada, waxay qayb ka tahay habka ay shirkaddu u wajaheyso xooji ganacsigaaga, hagaajinta bulshada iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada, sida ay sheegtay shirkadda.
Milkiilaha M & M's, Snickers, iyo shukulaatada cuntada xayawaanka sida Whiskas iyo Pedigree, waxay diirada saareysaa yareynta Qiiqa kaarboon hawlaheeda gaarka ah waxayna si tartiib tartiib ah u kordhinayaan tamarta la cusboonaysiin karo ee laga helo goobahooda adduunka oo dhan, iyadoo hadafku yahay in 100% isticmaalka tamarta ee ay isticmaasho ay ka madhnaan doonaan shidaalka la soo saaray sannadka 2040.
Nexus Tamarta waxay Bankia siin doontaa 100% koronto la cusboonaysiin karo, iyada oo la siinayo wadar ahaan 2.398 dhibcood oo sahay ah, inta u dhexeysa dhismayaasha xafiisyada madaxa iyo laamaha, iyadoo sanadkii la isticmaalo in ka badan 87 GWh. Nexus Energía waxay soo bandhigtay mid ka mid ah dalabkii ugu tartamayaasha ee heer dhaqaale iyo farsamo, iyada oo ay ugu mahadcelinayso isku duubnida badan iyo qalabka maamulka.
Go'aanka go'aaminta wuxuu ahaa shaqadii ugu fiicneyd ee laga qabtay dhammaan xarumaha Bankia iyo laamoheeda, taas oo micnaheedu noqon doono mid muhiim ah keydinta bangiga. Intaa waxaa dheer, shirkadda korontada waxay ku samaysay daraasad dhammaystiran goob kasta oo sahay ah si ay u hesho baahideeda dhabta ah ee tamarta korantada.
El Corte Inglés wuu yareeyay adeegso koronto inta lagu jiro 2016. Tiradani waxay u taagan tahay hoos u dhac ku dhowaad 25% oo ku saleysan 2008.
Rugta qaybinta, waxay u tarjumaysaa maareynta tamarta hufan mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn xeelado deegaanka. Ujeeddadeedu waa in la hagaajiyo adeegso koronto oo mudnaanta la siiyaa laydhka, qaboojiyaha ganacsiga, nidaamyada xakamaynta iyo qaboojiyaha.
Tallaabooyinka la qaatay, kooxdu waxay kor u qaadday qorshaheeda ay ku dayactireyso laydhka xarumaha dukaamaysiga iyadoo la hirgelinayo LED, isagoo badalaya ku dhowaad 160.000 oo nuur ah.
Dhanka qabowga ganacsiga, shirkadu waxay dooratay inay sii wado bixinta albaabada alaabta guryaha ee alaabada qaboojiyaha iyo qaboojiyaha, iyadoo looga dan leeyahay in laga dhigo kuwo badan hufan dhanka aragtida firfircoonaan.
CaixaBank waxay gacan ka gaysatay sidii loo bilaabi lahaa warshad wada noolaanshaha biomass ee ku taal Viñales (Chile), iyada oo loo adeegsanayo hab lagu dheellitiro qiiqa CO₂ ee ka soo baxa hawlaheeda sanadkii la soo dhaafay. Xisaabinta raadadka kaarboonkaaga iyo mashaariicda taageeraya ee wax ka geysta dhexdhexaad ka dhig Waa mid ka mid ah ficillada ka dhabeeya ballanqaadka CaixaBank ee ilaalinta deegaanka iyo la dagaallanka isbeddelka cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Kahor 2020 Citibank kaliya wuxuu doonayaa inuu cuno tamarta dib loo cusboonaysiin karo